Rudzi: kufamba uye kutarisa
Chero ani anowanzo shanyira nzvimbo dzakakurumbira dzepasirese, pasina mubvunzo, haapfuuri nyika inoshamisa seSpain. Zororo mukona ino yenyika zvinoreva zvivakwa zvepamusoro! Nyika ino ...
Imwe yendege dzinoshandiswa zvakanyanya pamigwagwa mipfupi nepakati nepakati nevatakuri vazhinji vanobva pasirese pasirese, kusanganisira Russia, ndiyo Boeing 737-800. Nyanzvi Ongororo ...
MaChinese anodana Gungwa reYero Huanghai. Iyo ndeya bheseni regungwa rakakura kwazvo pasi - Pacific. Iri gungwa, rine zita risingazivikanwe, riri kumahombekombe ekumabvazuva kwekondinendi yeEurasia, rakashambidzwa nekumadokero ...
Kwamunogona kuzorora muzhizha zvisingadhuri Mubereki wega wega anofanira kuita zvese zvaanogona kuti ave nechokwadi chekuti mwana wake anoshanyira gungwa muzhizha. Iwe haufanire kunge uine chikwama chakakora uye hombe ...
Saratov iguta rakakura riri pamahombekombe edziva reVolgograd, iri pakati penharaunda yezita rimwe chete. Imwe yenzvimbo dzakakosha kwazvo dzetsika, hupfumi uye dzidzo munzvimbo yeVolga. Nyaya huru yenyaya ino ichave vagari veSaratov. Vangani vanhu vanogara ...
Yekaterinburg ndiro guta guru reUral. Rimwe remaguta makuru eRussia. Ndiwo muganho uri pakati peEurope neAsia, uye unogona kukwikwidza nemadhorobha makuru epasirese. Hupenyu hunogara hwazara pano, ...
Nhare chivakwa chepakati nepakati chakamboshanda senzvimbo yekugara yakasimbiswa yeshe feudal ishe. Kazhinji iyo hombe yakaoma inosanganisira zvinoshandiswa, dzimba uye zvivakwa zvekudzivirira. Nhare dzeUkraine kubva muzana ramakore regumi nerimwe kusvika rechi11 MuUkraine ...
Krasnoyarsk nderimwe remaguta makuru muSiberia. Iri pamativi ese eRwizi rweYenisei, iyo inokamura guta kuita matunhu akati wandei: kuruboshwe-bhangi uye kurudyi-bhangi. Imwe neimwe ine yayo yakasarudzika ...
Iyo Mekong rwizi muVietnam. Nzvimbo yenzvimbo, tsananguro uye pikicha yerwizi rweMekong
Iyo Mekong rwizi ine sosi yaro munzvimbo yekumaodzanyemba kweTibetan Plateau, kunyanya panzira yeTangla. Ndiko kuyerera kukuru kwemvura muIndochina Peninsula iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweAsia, uye yechina pakukura ...
Hotel "Montenegro", Montenegro, Budvanska Riviera, Becici: wongororo. Montenegro Beach Resort 4 *
Montenegro inzvimbo inodiwa yezororo yevashanyi vedu. Mukutsvaga zviitiko zvitsva, vafambi vanouya pano, vaneta nenzvimbo dzekugara dzeTurkey kana Egypt. Mahotera eMontenegro anodiwa nekuda kwavo kwekutanga-kirasi sevhisi, yakachena kwazvo gungwa ...
"Sandy Bay", Sevastopol: tsananguro uye ongororo
Ndekupi kwekuwana nzvimbo muCrimea yemhuri zororo kana inonakidza kambani? Isu tinopa iwe kutarisisa kwako Pesochnaya Bukhta yetsika uye yekuvaraidza yakaoma. Sevastopol, iro guta mune iyi hotera, ichakugamuchira nemutsa ...
Nhoroondo yenharaunda chero ipi yakapfuma muzviitiko zvakasiyana izvo dzimwe nguva zvinoshandura zvakanyanya hupenyu hwevagari vayo. Sumy dunhu zvakare inochengeta mundangariro yayo zvinhu zvakawanda zvinonakidza zvakaitika padunhu rayo kubva panguva yeBronze ...
Nguva nenguva, muviri wemunhu unokundikana, uye kuti uwane zvakakwana, unongoda kuzorora uye kuzorora. Uye nzira yakanakisa yekuzadzisa iyi mhando yekuzorora kushanyira imba yekugezera kana sauna. Batsirwa…
Komuredhi Stalin hunhu hwakadzika munhoroondo yepasi seimwe yemienzaniso yehutsinye, hudzvanyiriri uye kuuraya vanhu vazhinji. Zvisinei, kuvonga kwaari, vanhu vakakwanisa kumisa Hitler uye fascism yake. Kunyangwe iye iye ...
Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti zororo regungwa rinogoneka chete muzhizha. Asi kunyangwe zororo rechando hachisi chikonzero chekuzviramba iwe mukana wekuwana yakanaka kunyange tan uye kushambira mugungwa rinodziya uye rakapfava. Zvakanaka ...
Hotel "Scandinavia" (Sestroretsk): kero, wongororo
Kana iwe wave nenguva uchida kutora zororo kubva mukumhanya-mhanya kweguta uye nebasa kunetswa, enda kuhotera "Scandinavia". Sestroretsk nemhepo yayo yakachena uye hunhu hwakanaka ndeimwe yesarudzo dzakanakisa dze ...
Hainan chitsuwa cheChinese chiri munzvimbo dzinopisa dzekumaodzanyemba kwenyika. Inonzi "Eastern Hawaii". Nhasi, pasina kuwedzeredza, ndiyo nzvimbo inozivikanwa kwazvo muMiddle Kingdom. Nenzira, yakawedzera mumakore achangopfuura ...
Metro "Vyborgskaya": nhoroondo uye mazuva edu
Muna 1975, Vyborgskaya metro chiteshi yakavhurwa mudunhu renhoroondo yeSt. Petersburg, inonzi iyo Vyborgskaya divi. Kunyangwe paine chokwadi chekuti nzvimbo yekutandarira haina kupera kwoumbozha, sematumba ekutanga ...
Zvipatara zveBerdyansk. Sanatorium "Lazurny", Berdyansk. Berdyansk - hutano nzvimbo "Niva"
Nzvimbo yekutandarira yeBerdyansk (Ukraine) inzvimbo inozivikanwa yekushanya kwehutano. Zvinhu zvakawanda zvinopa izvi, kunyanya, mamiriro ekunze akapfava uye nzvimbo yakanaka. Iyo yekutandarira iri pamhenderekedzo yegungwa. Berdyansk inozivikanwa nemushonga wayo ...
Mibvunzo ye55 mu database yakagadzirwa mu 0,760 masekondi.